ताइवानमा प्रथम महिला राष्ट्रपति निर्वाचित
ताइपेई (ताइवान), २ माघ । ताइवानको प्रमुख प्रतिपक्षी दल की नेत्री साई इङवेन यहाँको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत प्राप्त गरी ताइवानको इतिहासमा नै पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा निर्वाचित हुनुभएको छ । निर्वाचनमा बहुमत प्राप्तगरेपछि नव–निर्वाचित डिमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) का नेतृ साईले ताइवानको आफ्नै परिचय रहेको जनाउदै आफू ताइवानलाई थप मजबुत बनाउनमा सक्रिय रहने बताउनुभएको छ । उहाँले निर्वाचनमा आफ्नो दललाई बिजयी बनाउन बिशेष भूमिका खेल्ने सम्बद्ध सबैलाई शनिबार एक सम्बोधन मार्फत् धन्यबाद ज्ञापन गर्नुभएको छ । त्यस्तै निर्वाचिनमा...
टर्कीले सिरियाली शरणार्थीलाई श्रम स्वीकृति दिने
अङ्कारा (टर्की), २७ पुस । टर्कीको सरकारले सिरियाली शरणार्थी समस्यालाई व्यवस्थित गर्ने योजनाअन्तर्गत सिरियाली शरणार्थीसँग श्रम स्वीकृति दिने टर्कीका युरोपियन युनियन (ईयू) मन्त्री भोल्कान बोजकिरले बताउनुभयो । मन्त्री बोजकिरले ईयूका उपप्रमुख फ्रान्स टाइमर म्यान्ससँग संयुक्त रुपमा अङ्कारामा सोमबार गरेको एक पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभएको हो । यसले सिरियाली शरणार्थी बाच्नकै लागी यूरो पुगी श्रम गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको बोजकिरले बताउनुभयो । सन् २०१५ को नोभेम्बरमा ईयू र टर्कीबीच यस विषयमा एक सहमति गरेका थिए । सहमति अनुसार अङ्काराले...
हवाई आक्रमणमा सिरियामा बाह्र बालबालिकाको मृत्यु
बेरुत (लेबनान), २७ पुस । रसियाद्वारा गरिएको हवाई आक्रमण सोमबार सिरियाको अलेप्पो प्रान्तमा अवस्थित एक विद्यालयमा परेपछि त्यहाँ अध्ययनरत् कम्तिमा १२ जना विद्यार्थी तथा तीन जना वयस्क मारिएको अनुगमनले देखाएको छ । मानवअधिकारको अनुगमन गर्दै आएको बेलायतस्थित सिरियाली संस्थाका अनुसार आक्रमणबाट एक शिक्षकसहित तीन जना वयस्क तथा १२ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । घटनामा २० जना अन्य शिक्षक तथा विद्यार्थी घाइते भएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ । सरकार र विद्रोही इस्लामिक समर्थकबीच सिरियाको उत्तरी प्रान्तमा आइतबारदेखि झडप भइरहेको र रसियाद्वारा प्रहार गरिएको...
चीनमा पाण्डा आकारको ट्र्यास क्यान
चीन, ९ जनवरी / चीनको संघाई शहरमा पाण्डा आकारको ट्र्यास क्यानहरुमा फोहोर संकलन गर्न राखिएकोछ । आठ सयवोटा यस्ता क्यानहरु शहरको दुईभागमा राख्न लागिएको छ । यस प्रकारका ट्र्यास क्यानहरु मानिसलाई फोहोर कपडा दान गर्न प्रोत्साहान गर्ने उद्देस्यले राख्न लागिएको हो । ...
मोदीद्वारा पठानकोटको भ्रमण
नयाँ दिल्ली, २५ पुस । भारतीय प्रभानमन्त्री नरेन्द्रमोदीले शनिबार उत्तरी पंजाबको पठानकोटस्थित मुख्य सैन्य अखडाको भ्रमण गर्नुभएको छ । एकहप्ताअघि पाकिस्तानी लडाकूले सैन्य स्टेशनमा कार्यरत सात सुरक्षाअधिकारीको ज्यान जानेगरी आक्रमण गरेको यस ठाँउको प्रधानमन्त्री मोदीले भ्रमण गरी घटनाका बारेमा जानकारी लिनुभएको हो । स्रोतका अनुसार स्थानीय समय अनुसार बिहान ११ बजे पाठनकोट पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री मोदीलाई भारतीय बायुसेनाका अधिकारी जे. एस. धामुनले आक्रमणका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री मोदीले घटनामा घाइते भएका २० जना सुरक�...
पोल्याण्डको सरकारविरुद्ध अर्को आन्दोलन
ओरस (पोल्याण्ड), २५ पुस । पोल्याण्डको नयाँ सरकारविरुद्ध विपक्षी दलले फेरि अर्को आन्दोलन सुरु गरेका छन् । देशका महत्वपूर्ण सहरहरुमा शनिबार प्रदर्शन गर्दै प्रतिपक्षी दलले सरकारको नयाँ नीतिले प्रजातन्त्र र सञ्चार स्वतन्त्रतामा आँच आएको भन्दै यसको विरोधस्वरुप हजारौँ नागरिक प्रदर्शनमा उत्रेका हुन् । सत्ताधारी ल एण्ड जस्टिस पार्टीले संवैधानिक अदालत र सञ्चारमाध्यमलाई राज्यको मातहतमा ल्याउने गरी ल्याएको नयाँ नीतिले प्रजातन्त्र र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा तगारो लगाउन खोजिएको आन्दोलनकारी दलको जिकिर रहँदै आएको छ । सरकारको नयाँ नीतिले केही युरोपेली युनियनका...
छोरीलाई खेलाउने क्रममा राष्ट्रपतिको करङ भाँच्चियो
बुइनस एरिस (अर्जेन्टिना), २५ पुस । अर्जेन्टिनाका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति माउरिसियो म्याक्रीको आफ्नो छोरीलाई खेलाउने क्रममा करङ भाँच्चिएको अर्जेन्टिनाबाट प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ । उहाँलाई केही दिन घरमै आराम गर्ने सल्लाह दिइएको उहाँको कार्यालयले बताएको छ । छोरीसँग खेल्ने क्रममा राष्ट्रपति म्याक्री लड्नुभएको र उक्त घटनामा ५६ वर्षीय राष्ट्रपतिको करङ भाँच्चिएको राष्ट्रपतिको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । रासस-एपी ...
सिरियाली सरकार जेनेभा शान्ति वार्तामा सहभागी हुने
दमासकस (सिरिया), २५ पुस । यसै महिनाको अन्त्यतिर जेनेभामा हुने भनिएको शान्ति वार्तामा बस्न सिरियाली सरकार तयार रहेको यहाँका विदेश मन्त्रीले शनिबार बताएका छन् । वार्तामा बस्नुअघि सरकारले वार्तामा संलग्न हुने समूहहरुको सूची मागेको र सरकार ‘आतङ्ककारी’ समूहसँग भने वार्ता नगर्ने बताएको छ । सिरियाको राज्य सञ्चालित समाचार संस्था सानाले सिरियाली विदेशमन्त्री वालिद अल–मौआलेमले उक्त विचार शनिबार भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घका प्रतिनिधि स्टेफेन डे मिस्तुरासँगको भेटमा प्रकट गर्नुभएको हो । सिरियाली सरकारले राष्ट्रपति बसार अल असादलाई सत्ताबाट निकाल्न सङ्घर्षरत...
भारतले पाकिस्तानसँगको सीमामा थप सुरक्षाकर्मी खटाउने
नयाँ दिल्ली, २३ पुस । भारतले पाकिस्तानसँगको सिमानामा थप सुरक्षाकर्मी खटाउने भएको छ । हालैमात्र भारतीय हवाई सुरक्षा केन्द्रमा भएको आतङ्ककारी हमलापछि भारतको सो निर्णय आएको हो । अधिकारीहरुका अनुसार भारतले पाकिस्तानसँगको सीमा क्षेत्रहरु जम्मु र काश्मिर तथा पञ्जाव क्षेत्रमा ती सुरक्षाकर्मी खटाउने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानसँगका ती राज्यका सीमा क्षेत्रहरुमा थप दुई हजार अर्ध सैन्य बल खटाउने भएको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । बिहीबार भारत सरकारले सो निर्णय गरेको र अर्धसैन्य बललाई पनि यस विषयमा जानकारी दिइएको बताइएको छ । उक्त हवाई सुरक्षा केन्द्रमा गरिएको सो...
यूएईसँग इरानको आपत्ति
दुबई (यूएई), २३ पुस । संयुक्त अरब इमिरेट्सले खाडी मुलुकका लागि यूएईमा कार्यरत इरानका राजदूतसँग लिएको स्पष्टिकरणप्रति इरानले आपत्ति जनाएको छ । ती राजदूतसँग विदेश मन्त्रालयमार्फत् बोलाई साउदी अरबको आन्तरिक मामलामा भएकोे इरानी हस्तक्षेप बारेमा युएईले स्पष्टिकरण मागेको थियो । युएईको उक्त कार्यको इरानले आपत्ति जनाएको बताइएको छ । उसले युएईको सो कार्य अशोभनीय रहेको भनाई पनि राखेको छ । राजदूत मोहम्मद रेजा फायदलाई गत आइतबार लिखितरूपमा इरानद्वारा साउदी अरबमाथि गरेको विभिन्न खाले हस्तक्षेप र हालैको साउदी अरबको तेहरानस्थित कूटनीतिक नियोगमाथि गरिएको आक्रमणका...
प्रहरीको विद्यालयमा आक्रमण पचासको मृत्यु
लाइटन (लिबिया), २३ पुस । लिबियाको पश्चिमी सहर लाइटनमा रहेको एक प्रहरी विद्यालय (तालिम केन्द्र) मा बिहीबार भएको आत्मघाती आक्रमणमा परी कम्तीमा ५० व्यक्तिको मृत्यु भएको समाचार छ । यस राष्ट्रमा हालसम्म भएका आक्रमणहरूमध्ये आज भएको यो बम विस्फोट पनि एक भीषण आक्रमण भएको बताइएको छ । लिबिया राजधानी त्रिपोलीदेखि १७० किलोमिटर पूर्वमा रहेको तटीय सहर लाइटनमा प्रहरीको तालिम सञ्चालन गरिने सो विद्यालयमा पानी बोक्ने ट्याङ्करमा विस्फोटक पदार्थ राखेर आत्मघाती आक्रमणकारीले विस्फोटन गराएको सुरक्षा स्रोतले एएफपी समाचार समितिलाई बताएको छ । सो भीषण विस्फोटन गराइएको समयमा उक्त...
अमेरिकी व्यापार घाटा नोभेम्बरमा नौ महिनाकै कमी
वाशिङटन (अमेरिका), २२ पुस । अमेरिकाको व्यापार घाटा सन् २०१५ को पहिलो नौ महिनाको तुलनामा नोभेम्बरमा कमीआएको अमेरिकी वाणिज्य विभागले बुधबार जनाएको छ । नोभेम्बरमा आयात तथा निर्यात दुवैमा कमी देखिए पनि निर्यातको तुलनामा आयातमा कमी भएपछि व्यापार घाटा सकारात्मक देखिएको हो । अमेरिकी व्यापार सन्तुलनमा अन्य मुलुकसँगको स्थायी घाटामा क्रमशः कमी देखिएको र यो पाँच प्रतिशतमा झरी नोभेम्बरमा ४२.४ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको हो । विश्व अर्थ विश्लेषकले व्यापार घाटामा वृद्धि हुने बताउँदै आए पनि आश्चर्यजनक रुपमा कमी हुन आएको छ । त्यसैगरी अक्टुबरको व्यापार घाटा पहिले बताइएको ४३.४...
सन् २०१५ मा एघार लाख शरणार्थी जर्मनी प्रवेसः तथ्याङ्क
बर्लिन (जर्मनी), २२ पुस । सन् २०१५ मा ११ लाख शरणार्थी जर्मनी प्रवेश गरेको यहाँको गृह मन्त्रानलयले बुधबार जनाएको छ । गृहमन्त्री थोमस डे मिजियरले भन्नुभयो, गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०१५ भरी जर्मनीमा ११ लाख शरणार्थी आइपुगेका छन् । यो जर्मनीमा प्रवेश गरेका शरणार्थीका रुपमा विश्वयुद्धपछि यहाँ आउने आप्रवासीको सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या हो । यहाँ आउने करिब ४० प्रतिशत नयाँ आप्रवासी द्वन्द्वग्रस्त मध्यपूर्वी मुलुक सिरियाका नागरिक भएको जर्मनीको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसैगरी यहाँ आइपुग्ने दोस्रो धेरै शरणार्थी सङ्ख्यामा अफगानी नागरिकक भएको जनाइएको छ...
भेनेजुयलामा मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुनसक्ने
काराकस (भेनेजुयला), २२ पुस । भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलास मादुरोले मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर गर्नसक्ने कुरा यहाँका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । करिब एक दशकको अवधिमा प्रतिपक्षी दलले पहिलो पटक यहाँको राष्ट्रियसभा (कँग्रेस) मा हालै भएको निर्वाचनमा बहुमत पाएपछि राष्ट्रपति मादुरोले मन्त्रिपरिषद्मा परिवर्तन गर्न लागेको प्राप्त समाचारमा बताइएको छ । राष्ट्रपति मादुरोले मन्त्रिमण्डलमा गरिन लागेको हेरफेर भविष्यमा हुनसक्ने आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै र नयाँ जनमत अनुसार गरिन लागेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । सन् २०१३ मा राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार...
नयाँ दिल्ली (भारत), १८ पुस । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा मानवता विरोधी गतिविधि मौलाउन नसक्ने जनाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले शनिबार साँझ ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ, पाठनकोटस्थित एमआईजी–२१–बिसन तथा एमआई–३५ हेलिकोप्टरको मुख्य हवाई अखडामा आक्रमण गर्न खोज्ने आतंककारीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले पराजित गरेको बताउनुभएको हो । एक हतियारधारी समूहले शनिबार बिहानै पाठनकोटस्थित एमआईजी–२१–बिसन तथा एमआई–३५ हेलिकोप्टरको हवाई कार्यालयमा आक्रमण गर्न खोजेपछि चारजना को निधन भएको थियो । यो भारतीय सुरक्षाकर्मीको पाकिस्तानी सीमाबाट करीब ५०...